FAMADIHAN-DRAZANA : Mitana toerana lehibe amin’ny Fihavanana Malagasy
Iavahan’ny foko vitsivitsy tahaka ny merina, betsileo amin’ny foko sasany manerana ny Nosy ny famadihan-drazana. 3 mai 2022
Mifono soatoavina maro izy io toy ny fanamafisam-pihavanana, ny fifanajana eo amin’ny mpianakavy ary indrindra indrindra ny fanomezan-kasina ny razana. Samy manao ny fomba fanajana ny razany izay avokoa ny foko rehetra eto Madagasikara ary samy manana ny endrika sy ny vanim-potoana hanaovany izany.
Ifamorian’ny mpianakavy ny fotoam-pamadihana, na lavitra na akaiky, na eto an-toerana na ny avy any ampita. Miainga amin’ny tetiharana ny fanomanana ny famadihan-drazana, karazanina izy ireo tsy hahavery na iray aza ny taranaka fara aman-dimby. Voafono amin’izany ny fihavanana amin’ny filanonan’ny taranaka rehetra avy amin’ny lahy sy ny vavy, mifankahafantatra ny mpianakavy ary miaro amin’ny fifanambadian’ny mpifady izany rehefa ampahalalaina azy ny razany sy ny fiaviany. Miaro amin’ny tahotry ny Malagasy rehetra tsy ho "very faty" ihany koa ny famadihana. Zava-dehibe ho an’ny Malagasy ny "fidirana am-pasandrazana", antony tsy maintsy hanatanterahana ny fomba raha nisy antony manokana tsy nahatanteraka izany.
Mizara roa ny fanatanterahana ny fomba ho fametrahana ny hasin’ny razana ary miainga amin’ny famonoana omby izany. Io omby vonoina io no ifampizarana amin’ny mpianakavy ho mariky ny fihavanana, nantsoin’ny ntaolo ho nofonkena mitam-pihavanana izany. Ny menaka azo avy amin’io omby io ihany koa no ahosotra amin’ny lamba landy hamonosana ny razana, entina hampifintina azy. Ifandimbiasan’ny rehetra io hetsika io, manosotra ny menaka miakatra ny tsirairay no sady miteny anakam-po sy aloaky ny vava hoe "mandina ianao" no manonona ny toeran’ilay razana (Dadabe na Nenibe sns...). Iverimberenana io fihetsika io ary ao anatin’izany no angatahan’ny mpanatanteraka ny fitahiana hahasoa sy hahatsara azy ho "tsara antitra aza marofy". Mbola mino ny fitahian’ny Razana rahateo ny Malagasy manatanteraka ny famadihan-drazana. Misy antony ny fombafomba rehetra atao mandritra ny androm-pamadihana, hatramin’ny famoahana ny razana sy ny famolavolana azy ary ny fampidirana azy ao am-pasana indray, miainga amin’ny fanandroana mialoha avokoa ireo.
Dika fady mamoa-doza
Manana ny fadiny ihany koa ny fombam-pamadihana ary hananana loza mihitsy ny fandikana izany. Voafetra herintaona mialoha ny fotoana handevenana na hampidirana faty lena amin’ny fasana iheverana fa hanaovana famadihana, noho ny maha fahasoavana ny famadihana raha an-karatsiana kosa ny fandevenana. Toy izany ihany koa ny sakafo hamahanana ireo nasaina, tsy azo atao ny mamono kisoa ho an’ny Merina, ho fiarovana ireo razambe efa nody vovoka miverina amin’ny hasiny namolavolan’ny Mpahary azy tany am-boalohany. Miteraka tsy fanjariana sy fifanoheran’ny hataka sy fitahiana natao ny fandikana izany aorian’ny fotoana nanatanterahana ny fomba.